एन्ड्रोइडका लागि मास्टर रोयाल डीएम एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् [MOD] - लुसो गेमर
डिसेम्बर 4, 2021 डिसेम्बर 4, 2021 by जोन स्मिथ
गेमरहरूले पहिले नै Clash Royale को बारेमा सुनेका छन् जुन एक अनलाइन एक्शन गेमप्ले हो। तैपनि हतियार सहित अधिकांश प्रो स्रोतहरू प्रीमियम खण्डमा वर्गीकृत छन्। यसरी ती प्रो वस्तुहरूमा नि:शुल्क र सजिलो पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यहाँ हामीले मास्टर रोयाल DM ल्यायौं।
धेरै जसो खेल खेलाडीहरू जसले पहिले नै लडाई एरेनाहरू स्थापना र लडेका छन्। यी स्रोत पहुँच समस्याहरू अनुभव गर्न सक्छ। किनभने अधिकांश प्रिमियम स्रोतहरू प्रिमियम खण्डमा वर्गीकृत छन्। त्यसकारण ती स्रोतहरूमा पहुँचको लागि सदस्यता आवश्यक हुन सक्छ।
तर यहाँ यस परिमार्जन गरिएको संस्करण भित्र, स्रोतहरू सहित सबै प्रिमियम वस्तुहरू पहुँच गर्न निःशुल्क छन्। त्यसैले तपाईं मोडेड गेमहरू डाउनलोड गर्नका लागि सुरक्षित अनलाइन प्लेटफर्म खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी गेमरहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् र डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्दछौं मोड खेल सित्तैमा।
Master Royale DM Apk के हो
Master Royale DM Android मूल Clash Royale को अनलाइन मोडेड संस्करण हो। जहाँ प्रो स्किन सहित स्रोतहरू असीमित छन्। मुख्यतया गेमप्लेको आधिकारिक संस्करणले खेलाडीहरूलाई प्रो वस्तुहरू अनलक गर्न पैसा लगानी गर्न बाध्य पार्छ।
यस गेमप्लेको विशेषताले तिनीहरूको युद्ध क्षेत्र डेक संरचना गर्न यो उन्नत विकल्प प्रदान गर्दछ। सुरुमा, डेक वस्तुहरू र विषयवस्तुहरू सहित स्रोतहरू स्टोर भित्र लक गरिएको थियो। जसको मतलब गेमरहरूले ती आधारभूत स्रोतहरू अनलक गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
सुरुमा, स्रोतहरू सबैभन्दा कम छन् र सीमित वस्तुहरू अनलक गर्न मद्दत गर्दछ। तैपनि रणभूमि भित्र पुग्न सक्ने वीरहरूको संख्या पनि कम छ। यसैले थप नायकहरू र शक्तिहरू अनलक गर्न, गेमरहरूलाई समयमै रणभूमि भित्र भाग लिन सुझाव दिइन्छ।
तर नायकहरू सहित सीमित स्रोतहरूसँग, यो खेल भित्र हरेक खेल जित्न असम्भव देखिन्छ। त्यसैले हतियार सहित नि:शुल्क प्रिमियम वस्तुहरू अनलक गर्दै। विकासकर्ताहरू अन्ततः यो मोड गेम जहाँ सबै प्रतिबन्धहरू र नियमहरू हटाइन्छ।
नाम मास्टर रोयाल डीएम
आकार 105.7 एमबी
प्याकेज नाम net.master.royale
रत्न, सुनको सिक्का र किंग पोइन्ट काउन्टरहरू स्रोतहरूले भरिएका छन्। यदि तपाइँ तपाइँको काउन्टर पुन: भर्न चाहानुहुन्छ भने हामी खेलाडीहरूलाई खेल पुन: सुरु गर्न सिफारिस गर्दछौं। गेमप्ले पुन: सुरु गर्दा यसले स्वचालित रूपमा काउन्टरहरू रिफिल गर्नेछ।
रणभूमि भित्र मास्टर रणनीति बन्नु भनेको प्रशंसकहरूको लागि धेरै हो। किनभने तपाईको अंकले विश्वव्यापी रूपमा राम्रो स्कोर गर्छ, यसले अन्ततः तपाईको राम्रो रणनीति सीपहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ। बिन्दुहरू प्रदर्शन संग तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।
मानौं यदि तपाईं युद्धक्षेत्र भित्र आफ्नो प्रदर्शन कायम राख्न असफल हुनुभयो भने। त्यसोभए तपाईको अंक स्कोर स्वचालित रूपमा घट्नेछ र विश्वव्यापी रूपमा निम्न स्तरको कारण हुनेछ। मोड गेमप्ले भित्र कार्डहरू सहित स्रोतहरू अनन्त छन् सम्झनुहोस्।
तर जब यो खेल्ने र रणनीति निर्माण गर्ने कुरा आउँछ, तब यसलाई राम्रो गणना कौशलको साथ एक तेज दिमाग चाहिन्छ। यदि तपाइँ गणनामा असफल हुनुभयो भने विपक्षी संख्या सहित शक्ति। त्यसोभए तपाईंले युद्धको मैदान गुमाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसकारण तपाईं नायकहरू सहित विभिन्न शक्तिशाली हतियारहरू अनलक गर्ने आनन्द लिन तयार हुनुहुन्छ। स्रोत र लगानीको चिन्ता नगरी । त्यसपछि हामी ती एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई मास्टर रोयाल DM डाउनलोडको नवीनतम संस्करण स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं।
खेलको सन्दर्भमा सरल।
मोड गेमलाई एकीकृत गर्दै अनन्त स्रोतहरू प्रदान गर्दछ।
यसमा छाला, नायक, शक्ति, रत्न, र थप समावेश छ।
सुनको सिक्का र किंग पोइन्टहरू अन्तिम सीमामा अपग्रेड गरिएका छन्।
खेल इन्टरफेस मौलिक र मोबाइल-अनुकूल जस्तै छ।
मास्टर रोयाल डीएम एपीके कसरी डाउनलोड गर्ने
गुगल प्ले स्टोर भित्र, गेमरहरूले मूल खेल डाउनलोड गर्न सक्षम हुन सक्छन्। जहाँ नियमहरू सीमित छन् र स्रोतहरू सीमित छन्। तर जब यो गेमप्लेको मोडेड संस्करण डाउनलोड गर्ने कुरा आउँछ तब त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरूले Mod Apk प्रस्ताव गर्ने दाबी गर्छन्।
तर वास्तवमा, प्लेटफर्महरू सहित ती वेबसाइटहरूले नक्कली र भ्रष्ट फाइलहरू प्रस्ताव गर्दै छन्। त्यसोभए सबैले नक्कली फाइलहरू प्रस्ताव गरिरहेको बेला यस्तो परिदृश्यमा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले के गर्नुपर्छ? त्यसकारण यस्तो अवस्थामा, हामी गेमरहरूलाई हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्न र प्रामाणिक मोड एपीके फाइल पहुँच गर्न सिफारिस गर्दछौं।
मोडेड गेमहरूको स्थापना र एकीकरण जोखिमपूर्ण मानिन्छ। किनभने धेरैजसो अनलाइन पहुँचयोग्य मोडेड फाइलहरूमा मालवेयर हुन सक्छ। जसले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि हामीले विशेष मोड गेम स्थापना गर्यौं र कुनै समस्या फेला पारेनौं।
विभिन्न रणनीति र कार्य खेलहरू यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा प्रकाशित छन्। त्यसैले तपाइँ ती अन्य समान खेलहरूको मजा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ त्यसपछि लिङ्कहरू पछ्याउनुहोस्। जो हुन् Empire Rage Apk र Clash Mini Apk.
तपाइँ लामो समय देखि Clash Royale खेल्दै हुनुहुन्छ र सीमित स्रोतहरूको कारणले मास्टर प्लेयर बन्न असमर्थ हुनुहुन्छ। त्यसोभए चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यहाँ हामीले मास्टर रोयाल DM Apk को नामको साथ यो उत्तम मोडेड संस्करण ल्याएका छौं। यसले अनन्त स्रोतहरू र नायकहरू निःशुल्क प्रदान गर्दछ।
विभाग रणनीति, खेल ट्याग मास्टर रोयाल डीएम, मास्टर रोयाल डीएम एन्ड्रोइड, मास्टर रोयाल DM Apk, मास्टर रोयाल डीएम डाउनलोड, मोड खेल मेल अन्वेषण
एन्ड्रोइडका लागि दम टिभी एपीके डाउनलोड [चलचित्रहरू]
एन्ड्रोइडका लागि Movcine Apk डाउनलोड [Movies+IPTV's]